Missing Money Dhis Amaahdaada
garo xuquuqahaaga. Dib u eeg Xeerka dhaqanada Ururinta xaqa ah ee Daynta ee federaalka(FDCPA), taas oo dejisa heerarka caadiga ah ee wakaaladaha ururinta oo mamnuuca farsamooyinka xad gudubka ah. FDCPA waxaa dhaqan geliya FTC oo xad gudubyada waa in laga warbixiyaa Dayn ururuiyayaasha: Ma sheegan karo sheegashooyin been ama khiyaamo ah. Looma oggola inay sameeyaan hanjabaad madhan, inuu muujiyo ama maldaho, ama isticmaalo luqad cay ah ama caqiido la’aan ah.
Lama falan qaynayso kootooyinka macmiilka kooxda saddexaad ee aan loo oggolayn. Si khaldan ugama warbixin kartid macluumaadka warbixinta amaahda ama cadaadiska macaamiisha si loo bixiyo danyta aanay ku qaamaysnayn.
Haddi warbixintaada amaahdu ay tahay warbixinta kaadhka, buundadaada amaahda waa darajadaada. Buundada amaahda waa tiro ku salaysan taariikhdaada amaahda iyo “xaq u lahaanshaha amaahda” --- go’aanka sida ay u dhici karto adigu inaad dib u bixiso lacagta lagugu leeyahay. Tirada waxaa lagu xisaabiyaa qaacido ay sameeyeen shirkadaha ka warbixinta amaahda macliinka. Waxay siisaa macluumaad amaahdayaasha, caymiyaha, iyo loo shaqeeyayaasha si ay u qiimeeyaan codsigaaga wixii caymiska amaahda ah, shaqada ama daynisga guriga. Buundaada amaahda kuma jirto warbixintaada amaahda laakiin waxaa laga iibsan karaa xafiisyada amaahda. buundooyinka amaahda waxay ka bilaabmaan 200 ilaa 850.
Waxaad ka codsan kartaa nuqulka warbixintaada amaahda bilaashka ah mar sanadkii saddexda xafiis ee ugu muhiisan Equifax, Experian, iyo TransUnion. Dad badan waxay doortaan inay ka codsadaan hal warbixin afartii bilood ee kasta xafiis kasta si ay uga warhayaan amaahdooda muddada sanadka. Annualcreditreport.com waa websaydka keliya halka aad ka codsan karto warbixin amaaheed oo bilaash ah. Yaanay ku marin habaabin xayaysiisyada sheegta inay bixiyaan warbixino bilaash ah laakiin dhab ahaan ku soo dalaca kharash. Hubso inaad hagaajiso dhibaatooyinka warbixintaada.
> Gudbi warbixin booliska ah oo ku wargeli Guddida Ganacsiga Federaalka si aad uga warbixiso tuugada aqoonsiga.
> Xidh kootooyinka khiyaamada ah oo la xidhiidh shirkadahaaga kiridhit kaadhka si ay u soo saaraan kaadhadh cusub haddii kootooyin sharci ah laga heshiiyay.
> Saar digniinta khiyaamada oo ka xanib warbixintaada amaahda xafiiska amaahda. Waxaa jira habab badan oo lagu horumariyo buundadaada amaahda.
>Ku bixi biilashaada wakhti buure ah --- lacag bixinta habsanka ah waxay hoos u dhigi kartaa buundadaada amaahda.
>Xadid tirada kootooyikani cusub ee aad furato ---furitaanka kootooyinka cusub si lama huraan ah uma horumariso buundadaada amaahda.
> Dhererka taariikhda amaahda --- ha kuu furnaato kootada inta ugu dheer kuu furnayd oo ha shaqayso, oo isticmaal mid kasta ugu yaraan 6 bilood oo kasta.
> Bixi daynka oo hoos u dhig hadhaagaada. Qaybta buundadaada amaahda waxay ku salaysantahay qadarka daynka hadhsan.
>Ka hubi warbixintaada amaahda addoo codsanaya warbixintaada bilaashka ah oo ka warbixi wixii khalad ah.
Hubi si aad u aragto haddii shirkadu ay xubin ka tahay urur wayn, sida Mu’asasada Qaranka ee La talinta Amaahda iyo Ururka Wakaaladaha La talinta Amaahda. Xubnaha ururadan waa wakaalado aan macaash doon ahayn oo leh la taliyaal dhaqaale oo la ansixiyay oo buuxiyo tayo gaar ah iyo heerarka anshaxa U dooro shirkada hagaajinta amaahda si feejigan.
>Iska ilaali soo jeedinta dayn dhimista degdeg ah ama qorshaha dhammaynta daynka oo leh lacag badan oo la sii qadimo.
> Iskajir in wakaaladaha khiyaamada qaarkood ay la fakan doontaa iyagoo isticmaalaya heerka aan macaash doonka ahayn si ay lacag u ururiyaan. Wakaaladaha sharciga ah waa inay u diyaar ahaadaan inay kula fadhiistaan oo ay kaala hadlaan caadooyinkaaga kharash garaynta oo kaa caawiyaan la imaanshaha miisaaniyada.
> Ballamahan aan dhabta ahayn, sida tirtirka dayntaaada ee beesooyinka doolarka wakhti gaaban gduaheed, ama ballamaha dib u celinta buundo amaah oo xun, waxay noqon kartaa calaamad cas.
>La shaqee Minnesota ee ruqsada haysta ee leh xafiis deegaanka ah oo leh xafiis maxali ah oo haysta shaqaale la heli karo si ay uga jawaabaan su’aalahaaga.